निर्जीवन बीमा कम्पनीले संकलन गरे सवा २० अर्ब बीमा शुल्क, कुन कम्पनीको कति ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > निर्जीवन बीमा कम्पनीले संकलन गरे सवा २० अर्ब बीमा शुल्क, कुन कम्पनीको कति ?
निर्जीवन बीमा कम्पनीले संकलन गरे सवा २० अर्ब बीमा शुल्क, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले २० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।
२० वटा कम्पनी मध्ये राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बाहेकका १९ वटा कम्पनीले ८ महिनामा २० अर्ब २० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । फागुन महिनामा मात्रै २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् ।
बीमा समितिका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा बढी शिखर इनस्योरेन्सले २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । बढी बीम शुल्क आर्जन गर्ने दोस्रो कम्पनीमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । इन्स्योरेन्सले फागुन महिनासम्ममा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । तेस्रोमा रहेको नेको इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
यस्तै नेपाल इन्स्योरेन्सले ८४ करोड, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले ७३ करोड, नेशनलले ५५ करोड, हिमालयन जनरलले ६० करोड, यूनाइटेड इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको बीमा समितिले जानकारी गराएको छ ।
यस्तै इभरेष्टले ६७ करोड, प्रभुले १ अर्ब, आइएमईले १ अर्ब, प्रुडेन्सियलले ९४ करोड, लुम्बिनी जनरलले ९२ करोड, सिद्धार्थले १ अर्ब ५७ करोड, जनरल इन्स्योेरेन्सले ४७ अर्ब, अजोडले ८९ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् भने सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले ३९ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
२०७७ चैत्र १२ गते ०८:५७ मा प्रकाशित
कोरोना कहर : काठमाडौं प्रशासनले पनि भर्खरै निकाल्यो यस्तो सूचना !
फेरि थप ५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
लकडाउन हटाउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन
यसकारण एक्कासी सिभिल बैंकको शेयर मूल्यमा सर्किट
ख्याल गर्नुहोस् ! पैसाबाटै सर्छ कोरोना, अध्ययनले के भन्छ त ?